» “हाम्रो पार्टीमा, अब महन्थ–राजेन्द्रहरु,को कुनै,आवश्यकता छैन, मधेशी जनताले, उनीहरुको साथ, छोडिसके : महेन्द्रराय यादव” “हाम्रो पार्टीमा, अब महन्थ–राजेन्द्रहरु,को कुनै,आवश्यकता छैन, मधेशी जनताले, उनीहरुको साथ, छोडिसके : महेन्द्रराय यादव” – हाम्रो खबर
“हाम्रो पार्टीमा, अब महन्थ–राजेन्द्रहरु,को कुनै,आवश्यकता छैन, मधेशी जनताले, उनीहरुको साथ, छोडिसके : महेन्द्रराय यादव”
“जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेता तथा सांसद महेन्द्रराय यादवले अब आफ्नो पार्टीमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुको कुनै आवश्यकता नभएको बताएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘यिनीहरुको चरित्र पनि मधेशी जनताले बुझिसकेका छन् । लोभीपापी खरिद बिक्री गर्ने यीनै पात्रहरु हुन । यिनीहरु मधेशको मुद्दा वा अरु कुनै मुद्दा होईन, खाली मुद्दालाई भ¥याङ बनाउने र सत्तामा जानेहरु हुन । यस्ता पात्रहरुको मुक्त जहिलेसम्म हुँदैन, तबसम्म यो देशको माग पुरा हुँदैन् ।’ प्रस्तुत छ नेता यादवसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
“तपाईँको पार्टी अब,एक भएको हो ? फुटबाट बचेकै हो त ?
“होईन उहाँहरु प्रतिपक्षमा बस्नुभयो । प्रतिपक्षमा बस्ने कर्तव्य हुन्छ । उहाँहरु गएर प्रधानमन्त्रीसंग हारगुहार गर्नुभयो कि हामीहरुलाई मन्त्रिमण्डलमामा लिनुहोस् हामी तपाईहरुलाई विश्वासको मत दिन्छौँ भन्नुभयो । हामीकहाँ सुन्नमा त्यही आएको छ । उहाँहरुले मत दिनुभयो त्यो मत पनि उहाँहरुले त्यो मत पनि कतिवेला दिनुभयो जतिवेला माधवकुमारका मान्छे यता लाग्नुभयो । त्यसपछि बाध्य भएर उहाँहरुपनि आउनुभयो । उहाँहरुकै कारणले संसद्को हत्यापनि भयो । अनि त्यही कुरालाई मेटाउनको लागि बाध्य भएर यता मत हाल्नुभयो । उहाँको प्रधानमन्त्रीसंग के कुरा भयो थाहा छैन ।
“प्रधानमन्त्री देउवाले त उहाँहरुलाई पनि आफ्नो सरकारमा लैजाने भन्नुभएको छ अरे, अब तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
“त्यो त छैन । उहाँहरुको आफ्नै हारगुहार थियो । हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने कुरा गरेको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्ति हामी अदालतमा गयौँ । राष्ट्रपतिकहाँ गयौँ र अहिले हामीसंग २० जना सांसद् पुगेका छन् । उहाँहरुले हिजोको आफ्नो गल्ति सच्याउनको निम्ति हामीलाई भन्नुभएको छ । उहाँहरु देशलाई ध्वस्त गर्ने अनि आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने । यी पात्रहरुलाई त कसरी जोगाउन सकिन्छ ? सबै जनालाई हामीले निकालिसकेका छौँ । पार्टीले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अहिलेसम्म उनीहरुले त्यसको जवाफ दिएको अवस्था छैन । उहाँहरुलाई त कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
“त्यसोभए तपाईँ,हरु, अब एक भए)र, मिलेर जान तयार हुनुहुन्न ?
“निर्वाचन आयोगले तपाईँहरु,लाई आधिकारिकता दिएन र महन्थ ठाकुर, समूहलाई दियो भने के हुन्छ ?
“निर्वाचन आयोगले त्यस्तो गर्दैन् । निर्वाचन आयोगले त विधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही गर्ने हो । बहुमत जसको छ, पार्टी त्यसैको हुन्छ । यो संसद् बहाली भयो यसमा पनि १४६ जनाको हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले त्यहाँ कानुनी व्यवस्था के छ भने हामीसंग बहुमत छ । ३२–३३ जना पुग्र्ने सम्भावना छ । हामीलाई त्यहाँ उपस्थिति गराईन्छ । त्यहाँ हामीले हस्ताक्षर गछौँ । र, हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहन्छ ।”
“तपाईँहरुले बारम्बार महन्थ ठाकुर पक्षमाथि किर्ते र जालसाझी गरेको भन्नुभएको छ, उहाँहरुले के–के मा गर्नुभएको छ, बताउनुहोस न ?
“कानुनी व्यवस्था के छ भने तपाईले किर्ते काम नै गराउनु तर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी भएन । त्यसपछि हामीले चार जनालाई साधारण सदस्यबाट खारेज ग¥यौं । त्योप्रति अगाडि निर्वाचन आयोगमा दियौँ । उहालेपनि माननीय उपेन्द्र यादवमाथि कारवाई गरेको एक दुई जनाको पठाउनुभयो । उहाँले के गर्नु पर्दथ्यो भने आफुले जालसाझी गरेको भनेर पनि निर्वाचन आयोगमा दिनुपर्ने । उहाँले जे होस निवेदन दिनुभयो । त्यसकारण त्यो किर्ते गरेको कामको कुनै महत्व हुँदैन् ।”
“तपाईँहरु,संग संसदीय दलमा बहुमत छ हो ?
“हामीसंग संसदीय दलको पनि बहुमत छ । पार्टीमा पनि बहुमत छ ।